“Waxaan la kulmay aflagaado, balse hadii uu maqaarkeygu cadaan lahaa, iguma dhici lahayn arintaas”… Balotelli – Gool FM
“Waxaan la kulmay aflagaado, balse hadii uu maqaarkeygu cadaan lahaa, iguma dhici lahayn arintaas”… Balotelli
(Italy) 30 Maajo 2018. Weeraryahanka reer Talyaani ee Mario Balotelli ayaa wuxuu shaaca ka qaaday dhibaatada uu lasoo kulmay intii uu kusoo noolaa cunsuriyada, isagoo carabka kusii adkeeyay inuu wajihi lahaa dhibaatooyin intaas kasii yar hadii uu maqaarkiisa cadaan lahaa.
Wargeyska “La Jazzetta dello Sport” ayaa daabacay bug yar uu soo saaray saxafiga Alex McKinnon, kaasoo looga hadlay xidigii hore kooxaha Inter Milan iyo AC Milan oo talyaani ah, Manchester City iyo Liverpool oo England iyo Nice ee dalka France oo haatan uu ku sugan yahay.
Sida Kitaabkan lagu sheegay “Hadii aan cadaan lahaa waxaan lahaan lahaa dhibaatooyin yar, waxaan helay farriimo farabadan ee igaaga yimid dhanka Caruurta, tusaale ahaan inaanan ilaabin midabtakoorka. Waxay ahayd ceeb, wijigeyga wuu xirnaa mudo dhan 18 sano”.
“Kadib markii aan qaatay dhalashada Talyaaniga, waxaa jirtay maalin aanan ilaawi doonin nolosheyda, waxaan guul ka gaaray waajibaatkeyga iskuulka, hooyadey waxay ii ogolaatay inaan kubad ciyaaro, waxaan dhalinyarada weydiiyay ma wada ciyaari karnaa?, waxay igu yiraahdeen maya Mario suuaragal kuuma noqoneyso arintaas, sababtoo ah waxaad tahay madoow”.
“Waxaan ahaa madow, sidaa darteed waan ka duwanaa aragtidooda, waxaan u maleynayay inaysan i dooneyn sababtoo ah waxaan ahaa shaqsi la riixayay, laakiin waxaan ogaaday sanooyin badan kadib waxa ya tahay xaqiiqada”.
“Sanadii 2009, kulankii dhex maray kooxaha Inter Milan iyo Juventus wey ila hadleen waxayna igu yiraahdeen iyagoo qeylinaya wijigeyga Daanyeer dib ugu laabo Africa”.
Warbixin Cusub oo laga soo saaray Xaalada Caafimaad ee Maxamed Saalax kaddib markii uu u duulay Spain...(Ma Ciyaarayaa Koobka Adduunka?)
Arsenal oo heshiis cusub u soo bandhigtay Aaron Ramsey